» 5 Istiraatijiyadood ee Qofka Musalifka ahi Bilyaneer Ku Noqdo
5 Istiraatijiyadood ee Qofka Musalifka ahi Bilyaneer Ku Noqdo
Haddii aad xaalad adag ku soo marto ama aad is aragto in hantidaadii gabaabsi sii noqotay oo aad is aragto inaad qarka sii saran tahay, ha is dhiibin, ma tihid qofka kaliya ee tijaabadaa adag maraya, dadbadan ayaa kaaga horreeyay iney kufaan, laakiin markii dambe kasoo kabsaday oo mar kale dib u halay hanti.
Dadbadan ayaa aaminsan in musalifka iyo hantiilanimada ay u dhaxayso gaab aad u wayn oo aan la dabooli karin. Laakiin waaqica dhabta ah waxa uu sheegayaa wax ka duwan arrintaas. Waxaa maanta adduunka ku nool dadbadan oo taajiriin ah oo horeyna u soo maray dhaqaalo xumo, laakiin markii dambe noqoday dad billionaire ah.
Sidey u guuleysteen?
Inta aynaan ka hadlin 5 istiraatiijiyadood ee qofka musalifay uu ku noqon karo millionaire, waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaanno in rajada, adkaysiga iyo rabitaanku ay ahayd sirta guusha dadka ugu guulaha badan uguna taajirsan adduunka, illaa ay uga suurtogasho iney hadafkooda nolosha gaaraan si kasata oo uu u wayn yahay iyo caqabad kasta oo ka hortimaadaba.
Ku darso intaa, inuu qofku taajir noqdo ay u baahan tahay xariifnimo gaar ah. Dadka taajriiinta ah waxay bartaan waxwalba oo ay doonayaan iney natiijo ka gaaraan, dadka aqoontooda kordhiyaa waxay awood u yeeshaan iney waxwalba sameeyaan.
Hadaba, sida uu qoray website-ka Entrepreneur dadka taajiriinta waxay ku guuleystaan mid ka mid ah istiraatiijiyaddan 5 ta ah ee halka hoose ku xusan:
1 .Abuur gacansi Qiimo weyn leh
Waxaa la yiraahdaa “Hantidu waa abaalmarinta aad ka hesho shey qiimo badan oo aad nolosha dadka kale ku soo kordhiso.”
Waxaad soo kordhin kartaa shay cusub ama adeeg hore suuqa yaalla ayaad horumarin ku sameyn kartaa.
2 .Abuur gacansi ay dadku aad u jecelyihiin
Fikrad kaliya oo wanaagsan ayaad u baahan tahay si aad hantiile u noqoto. waxaa jira waxsoosaar kugu dhaga sidii dabka oo kale oo dadka oo dhani aaney illoobi karin xilli kastana ay xasuustaan.
3 .Adeegyo u fidi sectors gacansiga mustaqbal ku leh
Adduunku waxa uu markhaati ka ahaa sida uu u horumaray Airbnb oo markii hore ahaa website ay dad koobani yaqaannaa oo dadka guryaha ka kireeya, laakiin u markii dambe waxa uu isku bedelay shirkad caalami ah oo faa’iidooyin fara badan soo xareysa.
4 .Xiriiradda Internet-ka hagaaji
Aasaasaha “Whatsapp”, waxa uu hagaajiyay adeeggii internet-ka maantana dadbadan ayaa ka faa’ideysta oo ku xiran adeeggii uu soo kordhiyay.
5 .Dhulka iyo guryaha maalgasho
Dhismuhu waa maalgashiga mudada fog oo kobac muuqda ku sameyn kara rasamaalkaaga gaarka ah ee mudada fog.